घर जानेको लर्को ! स्थानीय सरकारले क्वारेनटायनमा राख्छ कि राख्दैन ? – POKHARA TOURISM NEWS
HomeNepalघर जानेको लर्को ! स्थानीय सरकारले क्वारेनटायनमा राख्छ कि राख्दैन ?
घर जानेको लर्को ! स्थानीय सरकारले क्वारेनटायनमा राख्छ कि राख्दैन ?
April 22, 2020 Rohit Basnet Nepal, News 0
प्रहरीलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मे, यात्रु असुरक्षित यात्रा गर्न बाध्य
बैशाख १० काठमाडौं : लकडाउन भएको महिना दिनपछि काठमाडौंकमा जम्मा भएका करिव ५००० हजार भन्दा धेरै यात्रु आ–आफ्नो घर फर्केका छन् ।
काठमाडौंमा विभिन्न पेसा र व्यवसाय गरी बसेका नागरिकलाई घर लैजान स्थानीय तहको अघोषित आह्वानपछि काठमाडौंमा यात्रुको भिड लागेको थियो । भिडमा महिना दिनको शिशु बोकेका सुत्केरी महिलादेखि ८० वर्षे वृद्धवृद्धासम्म थिए ।
झोला बोकेर घर जाने प्रतीक्षामा रहेका उनीहरूमध्ये कमैको मुखमा मात्र मास्क थियो । सामाजिक दूरी पूर्ण रूपमा उल्लंघन भएको देखियो । रोग संक्रमण हुने भयपछि भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले पटक–पटक माइकिङ गरेको थियो । तर, त्यसप्रति कसैले वास्ता गरेको देखिएन।
सडकका दुवै किनारामा यात्रुवाहक बस पार्क गरिएका थिए । तीमध्ये कति यात्रुले भरिएका थिए, यहीवेला अचानक परेको पानीले भिडलाई तितरबितर बनाएको थियो । झरी छल्न केही यात्रु सडक किनारकै घरको आडमा बस्न पुगेका थिए । केही भने रुझेरै सडकमा उभिएका थिए ।
यात्रुको भिड अनियन्त्रित हुने खतरा आइलागेपछि एसपी सबिन प्रधान झरीमा रुझ्दै यात्रुलाई सम्झाउन सडकमा खटिएका देखिन्थे । घरी उनी माइकिङ प्रभावकारी गर्न मातहतका प्रहरी टोलीलाई निर्देशन दिन्थे, घरी फोनमार्फत माथिल्लो तहमा फिल्ड रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए । जसरी पनि घर जाने प्रतीक्षामा रहेका यात्रु उनको आग्रहबाट रत्तिभर पनि प्रभावित थिएनन् । ‘यात्रु ओइरिएका छन् । सबै जसरी पनि घर जाने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छन ।
यात्रु पैदलै घर फर्कन सडकमा निस्कन थालेपछि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको आलोचना सुरु भयो । मजदुर तथा अलपत्र परेकाहरूको हकमा मात्रै भन्दै सरकारले स्थानीय तहलाई समन्वयकारी भूमिका निभाउन अघोषित निर्देशन दियो । अलपत्र परेकालाई घर फर्काउन सरकारका मन्त्री नै फिल्डमा खटिएपछि स्थानीय सरकारप्रति दबाब सिर्जना भयो । सोही कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्ना क्षेत्रका नागरिक घर लैजान सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना नै सार्वजनिक गरे । कतिपयले घर फर्काउन भन्दै तयार गरिएका बसको संख्यासमेत सार्वजनिक गरे ।
तर, स्थानीय सरकारले यात्रुलाइ गन्तव्यमा पुराए पछी क्वारेनटायनमा राख्छ कि राख्दैन यो विषय आज सबैको चासो बनेको देखिन्छ ।